मिश्रमा भेटिएको चम्चाको इतिहास, कसरी विकास हुँदै गयो विश्वमा ? -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ समय: १४:४३:१७
नेपाली संस्कृतिमा अझैसम्म पनि चम्चाले डाइनिङ टेबुलमा बसेर खाना खाने पद्धति सबैले अपनाउने गरिसकेका छैनन् । यद्यपि सहरीया केही घरानाहरुले भने यो संस्कृतिलाई आफ्नो अनिवार्य आवश्यकताको विषय पनि बनाएका छन् । जसका कारण बिस्तारै नेपाली संस्कृतिमा चम्चाले खाना खाने चलनको विकास हुन थालेको छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ । तर चम्चाको विकास कहाँबाट भयो ? भन्दा यसको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।